Ehellada Maxbuus Xaashi Cumar Xasan oo codsi ujeediyey dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ehellada Maxbuus Xaashi Cumar Xasan oo codsi ujeediyey dowladda Soomaaliya
Muqdisho – Mareeg.com: Muuse Xabad Tafad oo ka mid ah Ehelada dhibane Xaashi Cumar Xasan oo ku xiran muddo ka badan 20-sano dalka Talyaaniga oo loo heysto in uu ka danbeeyay dil Muqdisho loogu geystay Saxfiyad Ajnabi ah oo ayaa waxa uu dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay wax ka qabtaan arrinta Xaashi oo uu tilmaamay in si sharci daro ah uu ugu xiran yahay dalkaasi.
Muuse ayaa waxa xusay in sanadkii hore Muqdisho uu yimid islamarkaana guddoomiyaha golaha baarlamaanka dalka, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, iyo guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda C/qaadir Cosoble uu la kulmay islamarkaana ay ka wada hadleen arrimaha Xaashi Cumar Xasan iyo in ay wax ka qabtaan, waxaana uu sheegay in ay u balan qaadeen in arrimihiisa ay wax ka qaban doonaan, uuna ka rajeynayo in ay il gooni ay u yeelan doonaan dhibanahaasi.
Xaashi Cumar Xasan oo loo heysto in uu ka danbeeyay dil 1993 magaalada Muqdisho loogu geystay saxafiyad u dhalatay dalka Talyaaniga oo dabagal ku heysay sun la sheegay in xeybaha Soomaaliya ay ku shubaan maraakiib laga leeyahay Talyaaniga ayaa Mr Muuse waxa uu sheegay in uusan ku lug laheyn dilka saxafiyadda muwaadinkaasi Soomaaliyeed ee ku xiran muddada ka badan 20 sano sida sharci darada ugu xiran dalkaasi.
“Hooyada dhashay saxafiyadda la dilay ayaa sheegtay in wax dambi uusan laheyn Xaashi Cumar Xasan, dareenkeygu waa diidayaa in gabadheyda uu dilay Xaashi kuma lug laha kiiskani, Xaashi qudhiisa oo aan xabsiga uu ku jiro ku booqday marar kale duwan ayaa waxa uu sheegay in la kharinayo dadka ka dambeeyay arrintani laakiin mar’uun ayuu xaqa dilaacayaa” ayuu hadalkiisa ku daray Muuse Xabad Tafad.
Ugu danbeyntii Muuse Xabad Tafad oo aan weydiiyay xaaladda nololeed ee dhibane Xaashi ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid wanaagsan mar walbana uu ka walaacsan yahay sharci darada uu ku xiran mudada tiro beelka ah.
Alshabaab oo raba iney xayiraad saaraan degmada Buulo-burte
Somalia: Deputy Speaker accuses Immigration Departmen